မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင် ၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့ – Let Pan Daily
မုန်း၍ လည်းကျိန်စာ မတိုက်နဲ့ ချစ်ခင် ၍လည်း နောက် ဘဝပြန်တွေ့ ပါရစေ ဆုမတောင်း ပါနဲ့
Let Pan | September 19, 2020 | Knowledge | No Comments
ဘယ်သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်စာ မတိုက် ပါနှင့် ချစ်ခင် ၍လည်း နောက်ဘဝပြန်တွေ့ပါရစေ ဆုမတောင်းကြ ပါနဲ့ ကံ ကံ၏ အကျိုးရယ် သံသရာ ဆိုတာ ကိုရယ်
ယုံကြည် သက်ဝင် ကြပါစေ။ ကံမှန် ပါက အကျိုးပေး သန်၏ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေးတွေပါ။ ပဋာစာရီ လ
င်ကို မြွေကိုက်၊သားကြီး ရေနစ်၊သားငယ် စွန်ချီ၊
မိဘနှစ်ပါး နှင့် အကိုကြီး လေပြင်း မုန်တိုင်းကြောင့်ဆုံးရှုံး အဝတ်အစားမဲ့ အောင်ရူးခဲ့ ရတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ နှင့် တွေ့ တော့ ချစ်သမီး ဒီပွဲဟာ ငိုရမယ့် ပွဲ မဟုတ်ဘူး လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးပြီး ရယ်မော ရမယ့် ပွဲ တဲ့ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့.. အတိတ်ဘဝ တစ်ခုတုန်းက ခုသေဆုံး သွားကြတဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာ ၆ ဦးဟာချစ်သမီး ရဲ့ အိမ်ကို ဓားပြ တိုက် မီးရှို့ လူသက် လုပ်ကြတော့
ချစ်သမီးကပဲ စိတ်ဆိုး လွန်းလို့ ဒင်းတို့ ၆ ဦးလုံး ငါ့ မျက်စေ့ ရှေ့မှာ အသေဆိုး နဲ့ သေတာကို တပ်အပ်မြင် ရပါစေသားလို့ ဆုတောင်းခဲ့ ဖူးသတဲ့
ခု အဲ့ဒိဆုတောင်း ပြည့်ပြီ လေတဲ့.. ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်း ကံမှန်ရင် အကျိုးပေးသန် လွန်းပါတယ်။ သံသရာဟာ ဉာဏ်နဲ့ မဖြတ်ရင် မပြတ်ပါဘူး။
ပဋာစာရီ ရူးသွပ်နေချိန် မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ဘာ့ကြောင့် ကြုံဆုံခွင့်ရခဲ့ ပါသလဲ? အတိတ်က တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဝိပဿနာတရား အားထုတ် ခဲ့ဖူး လို့ပါပဲ။
Credit-(သစ္စာရွှေစည် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ၏ တရားတော် များပေ့ခ်ျမှ)
မုနျး၍ လညျးကြိနျစာ မတိုကျနဲ့ ခဈြခငျ ၍လညျး နောကျ ဘဝပွနျတှေ့ ပါရစေ ဆုမတောငျး ပါနဲ့
ဘယျသောအခါမှ မုနျး၍လညျး ကြိနျစာ မတိုကျ ပါနှငျ့ ခဈြခငျ ၍လညျး နောကျဘဝပွနျတှပေ့ါရစေ ဆုမတောငျးကွ ပါနဲ့ ကံ ကံ၏ အကြိုးရယျ သံသရာ ဆိုတာ ကိုရယျ
ယုံကွညျ သကျဝငျ ကွပါစေ။ ကံမှနျ ပါက အကြိုးပေး သနျ၏ ပွုသူအသဈ ဖွဈသူ အဟောငျးပါ။ ကံ ကံ၏ အကြိုးပေးတှပေါ။ ပဋာစာရီ လ
ငျကို မွှကေိုကျ၊သားကွီး ရနေဈ၊သားငယျ စှနျခြီ၊
မိဘနှဈပါး နှငျ့ အကိုကွီး လပွေငျး မုနျတိုငျးကွောငျ့ဆုံးရှုံး အဝတျအစားမဲ့ အောငျရူးခဲ့ ရတယျ။
မွတျဗုဒ်ဓ နှငျ့ တှေ့ တော့ ခဈြသမီး ဒီပှဲဟာ ငိုရမယျ့ ပှဲ မဟုတျဘူး လကျခုပျလကျဝါး တီးပွီး ရယျမော ရမယျ့ ပှဲ တဲ့ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့.. အတိတျဘဝ တဈခုတုနျးက ခုသဆေုံး သှားကွတဲ့ ဆှမြေိုးရငျးခြာ ၆ ဦးဟာခဈြသမီး ရဲ့ အိမျကို ဓားပွ တိုကျ မီးရှို့ လူသကျ လုပျကွတော့
ခဈြသမီးကပဲ စိတျဆိုး လှနျးလို့ ဒငျးတို့ ၆ ဦးလုံး ငါ့ မကျြစေ့ ရှမှေ့ာ အသဆေိုး နဲ့ သတောကို တပျအပျမွငျ ရပါစသေားလို့ ဆုတောငျးခဲ့ ဖူးသတဲ့
ခု အဲ့ဒိဆုတောငျး ပွညျ့ပွီ လတေဲ့.. ပွုသူအသဈ ဖွဈသူ အဟောငျး ကံမှနျရငျ အကြိုးပေးသနျ လှနျးပါတယျ။ သံသရာဟာ ဉာဏျနဲ့ မဖွတျရငျ မပွတျပါဘူး။
ပဋာစာရီ ရူးသှပျနခြေိနျ မွတျဗုဒ်ဓနှငျ့ ဘာ့ကွောငျ့ ကွုံဆုံခှငျ့ရခဲ့ ပါသလဲ? အတိတျက တဈကွိမျတဈခါ ဝိပဿနာတရား အားထုတျ ခဲ့ဖူး လို့ပါပဲ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ဓမ်မမိတျဆှေ တို့ ကြုပျတို့တှေ ဟာ ပဋာစာရီ လောကျ လညျး အခွနေေ မဆိုး ခဲ့ကွပါဘူး။ ကံကောငျး သူမြား တရားနာယူခှငျ့ ရကွသညျ။ ကံ အလှနျ ကောငျးသူမြား တရား အားထုတျခှငျ့ ရကွသညျ။ ကံဆိုးသူမြား တရားကို ရှောငျကွ သညျ။
ဓမ်မမိတျဆှမြေား ကံ ကောငျးသူလား ?? ကံ ဆိုးသူလား ?? သဗ်ဗေ သတ်တာ ကမ်မသကာ သဗ်ဗေ သင်ျခါရ အနိစ်စ ပါ တကား။
Credit-(သစ်စာရှစေညျ ဆရာတျော ဦးဥတ်တမ ၏ တရားတျော မြားပခြေျ့မှ)
မူးတယ်၊ မောတယ်၊ သံဓာတ် အားနည်း တယ်ဆို ဘာစားကြမလဲ
သရ ဏဂုံ သုံးပါး ကို အမြဲမပျက် ရွတ်ဆိုပွား များသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရရှိနိုင်သော အကျိုး တရားများ
သင့် ရဲ့ ညာ လက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရေအာင်.. နံပါတ် ဘယ်ေ လာက်လဲ..?